Akụkọ - Kedu otu esi ahọrọ igwe eletriki eletriki?
Kedu otu esi ahọrọ igwe eletriki eletrik?
Kttle eletrik na -abụkarị eji na ndụ anyị, gụnyere n'ụlọ ma ọ bụ na nkwari akụ. Mgbe anyị chọrọ mmiri ọkụ, ketulu eletriki nwere ike gboo mkpa anyị, mana ụfọdụ kettles eletrik na-abụghị ọkọlọtọ nwere ike bute anyị mmerụ ahụ, yabụ na ihu ụdị ngwa eletriki eletriki dị n'ahịa, gịnị ka anyị kwesịrị ime? Keduanyị nwere ike họrọ nke oma igwe eletriki igwe?
N'ozuzu leba anya na ihe dị n'ime na ihe mpụta, ihe dị n'ime dị mkpa karịa n'ihi na ọ dị na mmiri. Mgbe ị na -ahọrọ igwe eletriki eletrik, ị ga -elele ma tankị dị n'ime ya nwereSUS304 akara nke 304 igwe anaghị agba nchara, na -eguzogide oke okpomọkụ ma nwee ezigbo ike iji kpuchido ahụike mmadụ. Ejiri kettles eletriki AOLGA dị mmaSUS304 ma ọ bụ SUS316 igwe anaghị agba nchara iji hụ na nchekwa ngwaahịa na ịdịte aka.
Tụkwasị na nke ahụ, ihe mpụta nke ketulu eletriki dịkwa ezigbo mkpa. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ketulu eletriki dị n'ahịa a bụ plastik na seramiiki nchekwa, na enweghị isi ọ bụla. Mana enwerekwa azụmaahịa n'otu n'otu iji belata ọnụ ahịa. Ọ bụrụ na ejiri ya ogologo oge, a ga -ewepụta ihe ndị na -emerụ ahụ, nke ga -etinye ihe egwuanyị ahụike.
Mgbe ị na -azụta ketulu eletriki, na mgbakwunye na ilele ma ọdịdị ahụ ọ na -eju afọ ma ọ bụ ihe a na -atụghị anya ya, a ga -atụlekwa ya site na mmepụta ya, gụnyere ire ụtọ nke plastik mpụta nke ketulu eletriki ahụ. iji hụ ma plastik na kettle igwe anaghị agba nchara, ma ọ bụ na akpụchasịla mpekere plastik. . Enwere ike ịhụ ngwaahịa dị mma na usoro nrụpụta. Kelulu eletriki AOLGA na -esite na nka siri ike nke mba ụwa, enwere ike nwee ekele maka nka nke nrụpụta site n'ọdịdị dị mfe na ikuku.
Họrọ na arụ ọrụ okpomọkụ pere mpe
Họrọ ọkụ eletrik ketulus site na njikwa njikwa oke okpomọkụ nke nwere ike gbanyụọ ọkụ na -akpaghị aka mgbe esiri mmiri. Ọtụtụ nke ọkụ eletrik n'ahịa jiri ndị na -egbochi okpomọkụ.
Lelee akara ngwaahịa na nkọwa nke ọma. Ụkpụrụ ahụ na -akọwapụta na akara ngwaahịa kwesịrị izu oke, gụnyere: aha ụlọ ọrụ, adresị, ihe nlereanya, nkọwapụta (dị ka ike), ụghalaahịa, paramita voltaji, akara ike, akara maka ọdịdị ike ọkọnọ, wdg; ekwesịrị inwe mgbochi ịdọ aka na ntị na -adịghị mma, ụzọ nhicha zuru ezu, wdg gụnyere.
Ekwesịrị ịzụta kettles eletriki dịka omume ojiji na mkpa ndị dị. Ike nke ketles eletrik dị ugbu a n'ahịa dị n'etiti 0.6L na 1.8L. Ezinaụlọ nke mmadụ 2 ruo 3 nwere ike họrọ ketles eletriki ihe dịka 1.2L na 1000W; 4 ruo 5 Ndị mmadụ nwere ike họrọ ketulu eletriki 1.8L, 1800W.
Nke gara aga: Otu esi eji Glass Weight Scale CW275 nke ọma
Osote: Beijing na-eme atụmatụ ị nweta ụlọ obibi nke kpakpando ruru 1,000 n'ime afọ ise